Ny ho avy mamirapiratra amin'ny varotra | Martech Zone
Talata, Aprily 1, 2014 Talata, Aprily 1, 2014 Kelsey Cox
Raha ny ankamaroan'ny sehatry ny asa dia nahita fidinana lehibe amin'ny fahafahan'ny asa misy fandrosoana amin'ny haitao, ankehitriny kosa dia mirongatra ny fahafaha-miasa ary mitady ho safidy azo antoka amin'ny ho avy. Ny asa iray amin'ny efatra any Etazonia dia amin'ny sehatry ny fivarotana antsinjarany, saingy ity indostria ity dia mandrakotra mihoatra ny varotra fotsiny. Raha ny marina, maherin'ny 40% amin'ireo toerana amin'ny antsinjarany no asa hafa ankoatry ny varotra.
Ny asa ambony 5 miakatra amin'ny antsinjarany dia ny famakafakana marketing, marketing amin'ny mailaka, fikarohana voajanahary, fikarohana karama, ary media sosialy. Miharihary fa ny e-varotra dia zava-dehibe amin'ny fahombiazana amin'ny varotra ary ny fampiasam-bola ambony amin'ity taona ity dia amin'ny finday, fanamboarana tranokala ary marketing. Ny mpivarotra sasany dia efa mialoha ny lalao miaraka amin'ny fanavaozana vaovao hiakatra ambonin'ny ambiny. Kroger dia manana fakantsary infrared sensitive hafanam-batana hamaritana hoe firy ny zotram-pizahana hanokatra. Ny fampiharana an'i Walmart dia nifindra tamin'ny maody fivarotana mba hahafahanao mahita zavatra tadiavinao mora foana. Miaraka amin'ny tahan'ny fitomboan'ny haitao sy ny fiakaran'ny e-varotra dia hahita fiovana bebe kokoa amin'ny indostrian'ny mpivarotra isika ao anatin'ny 5 taona ho avy noho ny tamin'ny 100 lasa teo. Baynote mizara ny statistikan'ny mpivarotra sy ny mpiasa ao aminy, izay orinasa lohalaharana amin'ny lalao sy ny fampiasam-bola e-varotra ambony indrindra amin'ny 2014 amin'ny sary eto ambany.
Ny hoavin'ny varotra sy ny e-varotra dia mamirapiratra amin'ny asa, fanavaozana ary fampiasam-bola.
Tags: aeropostalebaynotekarmaxecommercekrogerMacy nytrano fanatobiana mensnordstromnuggetonline retailqtreiantsinjaranysephoraStarbucksny fivarotana fitoeran-javatrawalgreensWalmartwegmansSakafo manontolozappos
Marketing amin'ny mpihaino Cross-Platform